Sunday, 11 Feb, 2018 1:49 PM
उर्लाबारी, मोरङ, २८ माघ - उर्लाबारीस्थित बेतिनी सिमसार पछिल्लो समयमा पर्यटकीय र वन भोजस्थलका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । उर्लाबारी नगरपालिका–२ मा अवस्थित बेतिनी सिमसार क्षेत्रमा अवलोकन तथा वनभोज खान आउनेको आकर्षण बढेको छ । सिमसारमा केही समयअघिदेखि जलयात्रा सेवासमेत शुरु भएपछि आन्तरिक पर्यटक बढिरहेका छन् ।
नगरपालिकाको रु. तीन लाख ५० हजार लागतमा सो प्रतिमा स्थापना गरिएको हो । सो सिमसार क्षेत्रमा बेत, सर्पगन्धा, हर्राे, अमला, लहरे, टिम्बुर, सुनाखरीजस्ता वनस्पति तथा मैना, लुइँचे, धनेश, मयूर, बट्टाइ, हाँडीफोर, बकुल्लालगायत चराचुरुंगी पाइन्छ ।
उक्त स्थान आसपासमा हरिण, चितुवा, बँदेल, दुम्सी, सालक, वन बिरालो, गोहोरो, अजिंगरलगायत जीवजन्तु पाइन्छ । सिमसार प्रवेशका लागि प्रतिव्यक्ति रु. १० शुल्क तोकिएको छ ।